I-Silicon Carbide yabathengisi kunye nabavelisi-i-XTLCERAMARAC
I-Silicon Carbide Crubibles yenziwa ngokubanzi yekhabhoni ye-silicon kunye nezixhobo zegrafu. I-Silicon Carbide Crubibles ilungele ukunyibilikisa kunye nokunyibilikisa izinyithi ezixabisekileyo, izinyithi kunye nezinye izinyithi kwiziko lezinto zokuphetha. Zisetyenziswa kubushushu obufikelela kwi-1600 degree degree Celsius.
I-carbide ye-silicon ibulela i-iyunifomu kwaye iguqukayo xa inyibilike kwaye inamandla aphezulu kunye nokuxhathisa. Iqondo lobushushu elifanayo linika isinyithi esiphezulu se-molten esifunekayo lokuphosa iimveliso ezihlala ixesha elide kunye nentsimbi esemgangathweni.
I-Silicon Carbide inezinto zokuziphatha okuhle, amandla aphezulu, ukwanda komhlaba okuphantsi, ukumelana okuphantsi, ukumelana nokungakhathali, ubunzima obukhulu kwaye badle.
Ngenxa ye-selicon carbides ehleliweyo, isebenza kumashishini ahlukeneyo anjengeekhemikhali, i-sposti, i-ecoman, i-semicondcuctor, i-metaltiggy, njl.